U-principal "ubhadanywe edlwengula umfundi" - Ilanga News
Home Izindaba U-principal “ubhadanywe edlwengula umfundi”
U-principal “ubhadanywe edlwengula umfundi”
Kuthiwa ukhokhobele isisulu silele endlini yaso, wabanjwa esiqhoqhobele
UBANJWE oqotsheni eqhoqhobele umfundi emqashweni wakhe, uthishanhloko wakwesinye sezikole endaweni yaseQhudeni, KwaBaloyi, eNkandla. Usagcwele amathafa lo thishanhloko ngemuva kokubanjwa ngabafundi ngesigameko esenzeke ngoLwesihlanu ebusuku. Kuthiwa selokhu kwenzeke lesi sigameko, akabonwa emagcekeni esikole. Kuthiwa uthungathwa ngamaphoyisa kodwa kawamtholi. Ngokuthola kweLANGA, umfundi odlwenguliwe ufunda u-Grade 11,ngowasoNdini, ufike ngokuzofunda.
Kuthiwa wehlelwe yilokhu nje, ubekade ephuza nabanye abafundi, kubalwa naye uthishanhloko, okuvela ukuthi usebenzise lelo thuba lokuzibusisa ngomfundi. ILANGA likhulume nomfundi onukubeziwe (esiligodlile igamalakhe ukumvikela), wathi kuthe uma esephuze kakhulu, bamthatha abangani bakhe, bayomlalisa endlini, baqhubeka nokuzijabulisa ngeziphuzo kwenye indlu. Uthi uthishanhloko ukhokhobe wayongena endlini abelele kuyona, wamdlwengula. “Engihlala naye endlini uthi ubekade ethi uzolanda okuthile, uma efika sekukhiyiwe endlini ngaphakathi wabe eselunguza ngewindi, wabona uthishanhloko engidlwengula.
“Okuningi angizange ngikubone,ngiphaphame sengimanzi esithweni sangasese,” kusho umfundi. Uthi uphaphame enqunu, engasagqokile, watshelwa ngabanye abafundi ukuthi kwenzekeni ngesikhathi elele, bebamba oqotsheni uthishanhloko. Bathe uswele umgodi wokucasha, waphuma esekhophozela endlini. Ngokomthombo ongaphakathi kwezempilo esibhedlela esakhele kule ndawo, uthi ukunukubezwa kwabafundi kujwayelekile kule ndawo, kodwa kungalandelelwa ngendlela efanele. Utshele ILANGA ukuthi lo mfundi ufike ehamba nomunye umfundi ofunda kwesinye isikole kuyo le ndawo, behamba ngesimo esifanayo.
“Ngiyasola ukuthi kukhona abakufaka eziphuzweni zalaba bafundi bese bebangenela emqashweni yabo babadlwengule. “Sekukaningi sizama izinhlelo zokucela abezempilo ukuba bafundise abantu bakule ndawo, ngezinto ezifana nalezi nobubi bazo kodwa akwenzeki.”Le ngane ethi idlwengulwe uthishanhloko wayo, kufanele ifunelwe isikole kwenye indawo ungenelele uMnyango wezeMfundo ngoba ngeke isakwazi ukuqhubeka ngenxa yesimo esibi emphakathini ngesigameko esenzekile. “Sekufanele kucatshangelwe nokuphepha kwayo,” kusho umthombo. Ilungu lesigungu sabazali esiligodlile igama lalo ukuvikela umfundi, lithi bebengakabikelwa ngalolu daba.
“Udaba esake saluxoxa olwezikhalazo zokuphuza kakhulu kukathishanhloko ngoba bekukhalaza ozakwabo, bethi awusenzeki kahle umsebenzi. “Salubika kumhloli esekethe eNkandla, wathi uzombiza akhulume naye bese ebuyela kuthina kodwa akaze abuyele. Okwesigameko sokudlwengula sikuzwa kuxoxwa nje emphakathini nezingane, akekho oseke weza kuthina njengesigungu, wazosibikela,” kusho ilungu. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthi bazokhulumisana nehhovisi labo kwisifunda iKing Cetshwayo. “UMnyango uzolubheka lolu daba ngokuthi kutholakale umbiko ogcwele. Ukulala nengane yesikolekuyicala noma ngabe benivumelene.
Siyathemba ukuthi umthetho uzothatha indawo yawo,” kusho uMnu Mthethwa. Ikhansela lendawo uNkk Bathabile Manyoni, lithi nakuba lingenakho okuphathekayo, kodwa wudaba oluxoxwayo endaweni, bese luyizwile le ndaba. “Nginezingane ezifunda khona, kuyaxoxwa impela emphakathini ngesigameko kodwa angikalitholi ithuba lokuhlangana nomndeni obekuqashe kuwona ingane.
Wudaba lolu olungikhathazile njengomzali,” kusho uNkk Manyoni. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, usiqinisekisile isigameko. “Owesifazane oneminyaka ewu-23 ubudala, kusolwa ukuthi udlwengulwe elele endlini yakhe, ngezikhathi zo-8 ebusuku, endaweni yakwaBaloyi. Icala liphenywa esiteshini eKhombe.
Previous articleKusolwa eyomsebenzi eshiswa nendlu
Next articleILANGA CHRISTMAS SMART PHONE PROMOTION